ओहो, यो गोंगबु बसपार्क नै हो! (तस्बिरहरू) :: निर्मला घिमिरे :: Setopati
ओहो, यो गोंगबु बसपार्क नै हो! (तस्बिरहरू)
हालको गोंगबु बसपार्क। तस्बिरः निर्मला घिमिरे/सेतोपाटी
गोंगबु बसपार्क भन्नेबित्तिकै तपाईंहरूको दिमागमा कस्तो चित्र आउँछ?
केही समययता त्यहाँ जानुभएको छैन भनै पक्कै यस्तो आउला- अव्यवस्थित, कोलाहल, भिडभाड, फोहोर। सम्झेरै दिक्क लाग्ने!
हुन पनि केही समयअघि गोंगबु बसपार्क त्यस्तै थियो।
त्यहाँ पुगेर एकछिन उभिँदा पनि धेरैको टाउको दुख्थ्यो। मान्छेको घन्चमन्च, ठेलामठेल र कोचाकोच। अनि बसहरू पनि यत्रतत्र अव्यवस्थित। हिँड्न पनि सकस।
तर अहिले बसपार्कको कायापलट भएको छ।
कतिपयलाई पत्याउन मुश्किल होला। अहिले त्यहाँ पुग्ने हो भने सुरूमा त लाग्ला पनि, 'ओहो, यो गोंगबु बसपार्क नै हो?'
सडकबाट बसपार्कतिर लम्किँदै गर्दा ब्यानरहरूमा लेखेको देख्न सकिन्छ, 'बसपार्क पूर्ण रूपमा कम्प्युटराइज्ड भइसकेको हुँदा हस्तलिखित टिकट नकाट्नु होला।'
योसँगै यात्रु प्रतिक्षालयमाथि र वरपर लेखिएका चेतनामूलक सन्देशले पनि आँखा खिच्छ। कुनैमा कोरोना भाइरसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायहरू लेखिएको छ। कुनैमा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरू।
टिकट काउन्टरमा ठोक्किनु अगाडि नै यात्रुहरूको मद्दत गर्ने उद्देश्यले महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले राखेको यात्रु सहायता कक्ष छ। केही जानकारी चाहिए, सोधपुछ गर्न परे, अलमल परे यहाँ सोध्न सकिन्छ।
यही कक्षमा काठमाडौंदेखि सम्बन्धित गन्तव्यसम्मका लागि तोकिएको भाडा सूची टाँगिएको छ। यात्रुले आफ्नो गन्तव्यको भाडा कति हो भनेर यहीँ पनि हेर्न सक्छन्।
यात्रु सहायता कक्षबाट छिरेपछि टिकट काउन्टरहरू देखिन्छन्।
काउन्टरअगाडि राखिएको सूचनामूलक डिजिटल डिस्प्लेले सहजता थपेको छ। डिस्प्लेमा कति टिकट बुक भइसके, कति सिट संख्या बाँकी छन्, जानुपर्ने गन्तव्यको भाडादर देखिन्छ।
यात्रुहरूले कसैलाई नसोधी त्यही हेरेर जानकारी लिन सक्छन्। अनि टिकट लिन सक्छन्। यसले टिकटको मोलमोलाइ गरिरहनुपर्ने झन्झट छैन। यात्रु ठगिने जोखिम पनि रहँदैन।
अब कुरा गरौं टिकट काउन्टरको।
केही वर्षअगाडि काउन्टर अगाडि तँछाडमछाड हुन्थ्यो। मान्छेको ठेलामठेलमा कोचिनुपर्थ्यो। काउन्टरमा हात छिराएर पैसा दिँदै जसको चर्को स्वरले जित्यो, उसले टिकट पाउँथे। नसक्नेहरू रित्तै!
अहिले यो सबै फेरिएको छ।
हाल यहाँ ३१ वटा डिजिटल काउन्टर छन्। दसैंमा बढ्ने यात्रुको चापलाई लक्षित गर्दै पाँचवटा एक्स्टेन्सन काउन्टर थपिएको बसपार्कको व्यवस्थापन हेरिरहेको ल्होत्से बहुउद्देश्य प्रालिका मानव संशाधन व्यवस्थापक पंकज मल्लले जानकारी दिए।
काउन्टरहरू स्टिलको बारले छुट्याइएको छ। यहाँ लाइन लागेर पालैपालो टिकट काट्न सकिन्छ। कसैलाई ठेल्नु पर्दैन। किचिनु पनि परेन!
काउन्टरमा अनावश्यक मानिस प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। यसले गर्दा भिडभाड कम हुने मल्ल बताउँछन्।
बसपार्कमा टाँसिएको सूचनाजस्तै यहाँ हातले लेखिएको टिकट पाइँदैन। कम्प्युटरको स्क्रिनमा सिट लगायत विवरण हेरेर यात्रुले टिकट काट्न/बुक गर्न सक्छन्।
मल्लका अनुसार व्यवस्थित काउन्टर बनाउन करिब एक करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
कुनै समय सम्झेरै अत्यास लाग्ने, अव्यवस्थित र दुर्गन्धित बसपार्क अहिले सफा र चट्ट देखिन्छ। फोहोर फाल्ने ठाउँ पनि तोकिएको छ।
यो सबै परिवर्तन कोभिड महामारी चर्केका बेला भएको हो। मल्लका अनुसार कोरोना महामारीमा बसपार्क खाली थियो। त्यही बेला यसको सुधारका लागि कम्पनीले पहल गरेको हो।
'हामीले त्यही बेला यात्रुहरूको सहजताका लागि काम गर्‍यौं। सक्दो मेहनत गरेर बसपार्कको रूप फेर्ने प्रयासको परिणाम हो यो,' उनले भने।
कम्पनीले बसपार्कलाई जतिसक्दो सहज, सफा र यात्रुमैत्री बनाउन खोजिरहेको छ। अहिले अफलाइन टिकट भए पनि दसैंलगत्तै अनलाइन सेवा दिने गरी अगाडि बढेको पनि उनले जानकारी दिए।
बसपार्कको अर्को मुख्य समस्या आपराधिक गतिविधि पनि हो। लुटपाट, चोरी, झैझगडासम्म। यसको समाधानमा सहयोग होस् भनेर परिसरमा सिसिटिभी जडान गरिएको छ। अनि यात्रुहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न माइकिङ व्यवस्था पनि छ।
पहिले यहाँ झिँगा भन्किने, फोहोरी, खुला खाजाघर थिए। अहिले ती सबै हटेका छन्। हेर्दा सफा-सुग्घर देखिने खाजाघर बनेका छन्। तिनमा स्वस्थकर र सुलभ मूल्यमा खाना-खाजाका परिकार पाइने मल्लको भनाइ छ। खानेकुराको रकम ग्राहकले अर्डर गर्दा नै दिनुपर्छ।
त्यस्तै बसपार्कभित्रै पेट्रोलपम्प, बाहिरबाट आएका सवारीसाधन धुने तथा सर्भिसिङ सेवा उपलब्ध छ। यहाँ पुग्ने मोटरसाइकल, स्कुटर लगायत सवारीका लागि पार्किङस्थल छुट्याइएको छ।
ल्होत्से बहुउद्देश्य प्रालिले बसपार्कभित्रै सपिङ कम्प्लेक्स 'ल्होत्से मल' पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
२०५६ सालदेखि सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा सञ्चालित बसपार्कमा डेढ सय बढीले रोजगारी पाएका छन्। यहाँबाट दैनिक लामो लामो दुरीका एक सय ६५ वटा गाडी छुट्ने गरेको ल्होत्से प्रालिले जनाएको छ।
सबै तस्बिरहरूः निर्मला घिमिरे/सेतोपाटी
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २०, २०७८, ०५:२४:००